Incazelo: Ihhotela Asia Ihhotela Isilinganiselwa 3 uchaza indzawo lelungele wena, amanani ezifanele nge service enhle kakhulu. Centre of Bangkok, lapho traffic bagxila zamabhasi, izakhiwo zebhizinisi kanye nehhovisi, kungaba kubhekwe indawo ekahle ibhizinisi abantu, abathengi kanye nezivakashi ngenhloso ezamasiko kanye self-ajwayelane edolobheni.
Amagumbi: 650 amakamelo lwezigaba eziningana asezindaweni isakhiwo eziyishumi storey izakhiwo zesimanje. Amagumbi kanye e- "Isudi" efulethini inedizayini zakudala ifakwe wonke Izinsiza ejwayelekile ngokuvumelana ikilasi lehhotela.
Amagumbi Asia Ihhotela 3 - endaweni zihlalo, flat TV, mini-bar inala iziphuzo, isiqandisi, zemabula yokugezela, ehlukile amanzi kampompi okuphuza, bathrobes.
Ukudla: Okunikelwe ihhotela ukuhlala nohlobo ukudla "Breakfast" noma "Isigamu." Ihhotela has zokudlela ezine Amathrendi ezahlukene Culinary. Classic yokudlela Thai - indawo ozithandayo ukuze uphumule futhi ukudla izivakashi nezakhamuzi. Rio Grill ukumema ukunambitha ukudla Brazilian, wakhonza Chinese okujabulisa Culinary ezahlukene izifundazwe eChina, amakhono Vietnamese nge ukunambitheka yokuqala okwethulwa Saigon Vietnamese.
Ngezikhathi zakusihlwa, izivakashi Asia Ihhotela 3 ahlangane a lounge cafe ukujabulela cocktail exotic umculo bukhoma. Esikhathini «Crystal» Emini ungahlala phansi inkomishi yekhofi ibha ethokomele.
Ulwazi Olwengeziwe: Indawo eyinhloko ukuphumula ehhotela - amabili ongaphandle okubhukuda nge khulula ilanga loungers kanye ebhishi amathawula. Ngaphezu kwalokho, inkantolo lomphebezo kanye ejimini, spa sauna. Ngokwesiko ukunikela umhlangano massage abadumile Thai. Ngezikhathi zakusihlwa, izivakashi ukuhlela disco.
amasevisi Business ukubandakanya ukuhlinzekwa imishini kanye namakamelo zemihlangano yebandla, inkonzo nemisebenzi technical support. Ihhotela igodle izikhala yemihlangano emazingeni ahlukene, yona ifakwe isikhungo ibhizinisi imishini yokukopisha nezinye izinto.
Izivakashi Asia Ihhotela Bangkok inikeza amasevisi asekhaya: izinwele salon, zokuhlanza owomile kanye nezinsizakalo elondolo. Ngaphakathi ehhotela has a esitolo isikhumbuzo, kwedeski travel, exchange, isitoreji umthwalo, ATM, izindawo ezivuthayo, engenantambo inthanethi. yokupaka Mahhala iyatholakala eceleni kwehhotela lethu.
Inikeza indawo ekhethekile izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala futhi bakwazi ukuthatha ekamelweni elilodwa Embhedeni owenezelwe noma uhlaka. Kodwa isilwane uyakuphuma endlini - ihhotela alamukeli izivakashi ezifuywayo.
Izilinganiso Asabela kanjani zezivakashi kwadingeka ngihlale Asia Ihhotela 3, kumele kuphetfwe ukuthi hhotela bemthanda abahambi isiRashiya, sibonga amanani ezingabizi futhi indawo ekahle e Bangkok, okuyinto ikakhulukazi ezikhangayo kubathandi esitolo izinkambo.
I esiteshini esiseduze sezitimela ezihamba, okuyinto ikuvumela ukuba asheshe izungeze lo muzi. Kunalokho, kunemibono eminingi izitolo zokuthenga ukudla nezindawo zokudlela ezincane Thai cuisine emangalisa kanye eziyinxanxathela ezinkulu kukhona ngaphakathi ukuhamba ibanga imizuzu 5-7 of.
Ihhotela likuvumela wokwamukelwa futhi service enhle ngamanani ezifanele. Kucatshangwa ukuthi ihhotela elithi "Asiya" - lesikahle for ikhasimende ophansi izindawo isilinganiso ngokomzimba.
Kuhle Vacations - Ukunikezwa Bath 'at Narva'
Ihhotela "Eco-indlu" Adler: ukubuyekezwa, izincazelo, amakamelo, hambo, amasevisi angeziwe
Ihhotela "Ibis" (Samara) - ukhululekile 3-ihhotela lezinkanyezi ngezamabhizinisi
Amabili ngilambatha Sword yokulwa: umlando kanye nezithombe
Yini ukulungiselela kuyokusiza ukuba sibhekane ngokuphumelelayo ukungabekezelelani ukuze gluten?
Yokungakhokhi inkokhelo ngenxa yokwephula ezinzima
Izimbangela izinyawo flat. Indlela esiphatha ngayo flatfoot: iqoqo izinyathelo
Yabesifazane izingubo wholesale eMoscow
Izimonyo Holika Holika: Izibuyekezo ikhasimende
Ukubhoboza udebe eliphezulu (izithombe)